Kudzorera—Jehovha Ari Kuita “Zvinhu Zvose Zvitsva” | Swedera Pedyo
1, 2. Kurasikirwa nei kunotambudza mhuri yevanhu nhasi, uye zvinotiita kuti tinzwe sei?
MWANA anorasikirwa nechitoyi kana kuti anouraya chitoyi chake chaanoda zvikuru obva apangura mhere. Mhere yacho inorwadzisa mwoyo! Zvisinei, wakamboona here kuti chiso chomwana chinonyevenuka sei mubereki paanodzorera chakaraswa? Kumubereki, chingava chinhu chiri nyore kuwana chitoyi chacho kana kuti kunyange kuchigadzira. Asi mwana mwoyo mbembee uye anoshamisika zvikuru. Changa chichiita sokuti chaenda zvachose chadzorerwa!
2 Jehovha, Mubereki mukuru, ane simba rokudzorera izvo vana vake vepasi pano vangaona sokuti zvarasika zvisina tariro. Chokwadi, hatirevi matoyi chaiwo. Mu“nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo” dzino, tinofanira kutarisana nokurasikirwa kwakakura zvikuru. (2 Timoti 3:1-5) Zvizhinji zvinokosheswa nevanhu zvinoratidza sezvinongogara zviri mungozi—misha, zvinhu zvavo, mabasa, kunyange utano. Tingavhiringidzikawo patinofunga nezvokuparadzwa kwezvakatipoteredza nokurasikirwa kunoguma kwaitika, nokutsakatika kwemarudzi mazhinji ezvinhu zvipenyu. Zvisinei, hapana chinotirwadza sokufirwa nomumwe munhu watinoda. Kunzwa kurasikirwa uye kusava nesimba pamusoro pazvo kungatisiya tapererwa.—2 Samueri 18:33.
3. Itariro yei inonyaradza inotaurwa pana Mabasa 3:21, uye Jehovha achaizadzisa munzirai?
3 Saka zvinonyaradza kwazvo kudzidza nezvesimba raJehovha rokudzorera! Sezvatichaona, pane zvinoshamisa izvo Mwari anogona uye achadzorera kuvana vake vepasi. Kutaura zvazviri, Bhaibheri rinoratidza kuti Jehovha ane chinangwa cho“kudzorerwa kwezvinhu zvose.” (Mabasa 3:21) Kuti aite kudaro, Jehovha achashandisa Umambo hwaMesiya, hunotongwa noMwanakomana wake, Jesu Kristu. Uchapupu hunoratidza kuti Umambo uhwu hwakatanga kutonga mudenga muna 1914. * (Mateu 24:3-14) Chii chichadzorerwa? Ngatimbotaura nezvemamwe mabasa makuru aJehovha okudzorera. Rimwe rawo tava kugona kutoriona nokurinzwa. Mamwe achaitika zvakazara munguva yemberi.
Kudzorerwa Kwokunamata Kwakachena
4, 5. Chii chakaitika kuvanhu vaMwari muna 607 B.C.E., uye Jehovha akavapa tariroi?
4 Chinhu chimwe icho Jehovha akatodzorera kunamata kwakachena. Kuti tinzwisise kuti izvi zvinorevei, ngatimboongorora muchidimbu nhoroondo youmambo hwenyika yeJudha. Kuita kudaro kuchatipa nzwisiso inofadza yesimba raJehovha rokudzorera riri kushanda.—VaRoma 15:4.
5 Fungidzira kuti vaJudha vakatendeka vakanzwa sei muna 607 B.C.E. pakaparadzwa Jerusarema. Guta ravo ravaida samare rakaitwa ungwandangwanda, masvingo aro akakoromorwa. Chakaita kuti zvitonyanya, temberi ine mbiri iyo Soromoni akanga avaka, muzinda mumwe wokunamata Jehovha kwakachena munyika yose, yakasiyiwa ava matongo. (Pisarema 79:1) Vakapona vakaendeswa kuBhabhironi vari nhapwa, vachisiya nyika yokumusha kwavo rava dambiro remhuka dzomusango. (Jeremia 9:11) Mukuona kwevanhu, zvose zvaiita sokuti zvakanga zvatsakatika. (Pisarema 137:1) Asi Jehovha, uyo akanga anguri ataura nezvokuparadzwa uku, akapa tariro yokuti nguva yokudzorerwa yakanga iri mberi.
6-8. (a) Musoro upi unongoramba uchidzokororwa mumabhuku evaprofita vechiHebheru, uye uprofita ihwohwo hwakatanga kuzadzika sei? (b) Munguva dzino vanhu vaMwari vakaona sei kuzadzika kwouprofita hwakawanda hwokudzorera?
6 Kutaura chokwadi, kudzorerwa wakanga uri musoro waingodzokororwa mumabhuku evaprofita vechiHebheru. * Achivashandisa, Jehovha akapikira nyika yaizodzorerwa uye yaizogarwazve, yakaorera, yakadzivirirwa pazvikara zvomusango nokurwiswa nevavengi. Akarondedzera nyika yavo yaizodzorerwa separadhiso chaiyo! (Isaya 65:25; Ezekieri 34:25; 36:35) Kupfuura zvose, kunamata kwakachena kwaizodzorerwa, uye temberi yaizovakwazve. (Mika 4:1-5) Uprofita uhwu hwakapa vaJudha vakanga vari nhapwa tariro, huchivabatsira kutsungirira utapwa hwavo hwemakore 70 muBhabhironi.
7 Pakupedzisira, nguva yokudzorerwa yakazosvika. Vasunungurwa vachibva kuBhabhironi, vaJudha vakadzokera kuJerusarema ndokunovakazve temberi yaJehovha ikoko. (Ezra 1:1, 2) Chero bedzi vaitevera kunamata kwakachena, Jehovha aivakomborera nokuita kuti nyika yavo ive yakaorera uye yakabudirira. Akavadzivirira pavavengi nezvikara zvakanga zvatonga nyika yavo kwemakumi emakore. Vanofanira kuva vakafara zvisingatauriki nesimba raJehovha rokudzorera! Asi zviitiko izvozvo zvaingomirira kuzadzika kwokutanga, kuduku, kwouprofita hwokudzorera. Kuzadzika kukuru kwaizouya “pamazuva okupedzisira,” panguva yedu chaiyo, apo Mudyi Wenhaka akanguri apikirwa waMambo Dhavhidhi aizogadzwa pachigaro choUmambo.—Isaya 2:2-4; 9:6, 7.
8 Jesu achangobva kugadzwa pachigaro choUmambo hwokudenga muna 1914, akatarisira zvinodikanwa pakunamata nevanhu vaMwari vakatendeka vari pasi pano. Kungofanana naKoreshi mukundi wePersia akasunungura vaJudha vakanga vasara musimba reBhabhironi muna 537 B.C.E., Jesu akasunungura vaJudha vomudzimu vakanga vasara—vateveri vake chaivo—kubva musimba reBhabhironi romuzuva ranhasi, muzinda wechitendero chenhema wenyika yose. (VaRoma 2:29; Zvakazarurwa 18:1-5) Kubvira muna 1919, kunamata kwakachena kwakadzorerwa munzvimbo yakwo yakakodzera muupenyu hwevaKristu vechokwadi. (Maraki 3:1-5) Kubvira ipapo, vanhu vaJehovha vakamunamata vari mutemberi yomudzimu yakacheneswa yakadzorerwa—urongwa hwaMwari hwokunamata kwakachena. Nei izvi zvichikosha kwatiri nhasi?
Kudzorerwa Kwezvinhu Zvomudzimu—Chikonzero Nei Kuchikosha
9. Pashure penguva yevaapostora, chechi dzechiKristudhomu dzakaitei nokunamata Mwari, asi Jehovha akaitei muzuva redu?
9 Imbofunga nhau dzakaitika. VaKristu kare muzana remakore rokutanga vakafara nokuva nezvikomborero zvomudzimu zvakawanda. Asi Jesu nevaapostora vakafanotaura kuti kunamata kwechokwadi kwaizokanganiswa kworasika. (Mateu 13:24-30; Mabasa 20:29, 30) Pashure penguva yevaapostora, chiKristudhomu chakamuka. Vafundisi vacho vakatora dzidziso netsika dzechihedheni. Vakapotsa vaita kuti kusvika kuna Mwari kuve chinhu chisingabviri, vachimuti Utatu husinganzwisisiki uye vachidzidzisa vanhu kureurura kuvapristi uye kunyengetera kuna Mariya ne“vasande” vakasiyana-siyana panzvimbo pokuna Jehovha. Zvino, pashure pemazana akawanda emakore okukanganisa kwakadaro, Jehovha akaitei? Pakati penyika yanhasi—nyika izere nenhema dzechitendero uye yaodzwa netsika dzevasingadi Mwari—akapindira ndokudzorera kunamata kwakachena! Pasina kuwedzerera, tinogona kutaura kuti kudzorerwa uku ndechimwe chezvinhu zvinokosha zvikuru zvakaitika munguva dzazvino.
10, 11. (a) Zvinhu zvipi zviviri zvinobatanidzwa muparadhiso yomudzimu, uye zvinokubatanidza sei? (b) Jehovha akaunganidza muparadhiso yomudzimu vanhu vorudzii, uye vachava neropafadzo yokupupurira chii?
10 Naizvozvo vaKristu vechokwadi nhasi vanofadzwa neparadhiso yomudzimu. Paradhiso iyi inobatanidza chii? Zvikurukuru zvinhu zviviri. Chokutanga, kunamatwa kwakachena kwaMwari wechokwadi, Jehovha. Akatikomborera nenzira yokunamata isina nhema nokumonyaniswa. Akatikomborera nezvokudya zvomudzimu. Izvi zvinotigonesa kudzidza nezvaBaba vedu vokudenga, kuvafadza, uye kuswedera pedyo navo. (Johani 4:24) Rutivi rwechipiri rweparadhiso yomudzimu runobatanidza vanhu. Sezvakafanotaurwa naIsaya, “pamazuva okupedzisira,” Jehovha akadzidzisa vanamati vake nzira dzorugare. Akabvisa hondo pakati pedu. Pasinei nokusakwana kwedu, anotibatsira kupfeka “unhu hutsva.” Anokomborera zvatinoita achishandisa mudzimu wake mutsvene, uyo unobereka zvibereko zvakanaka kwazvo matiri. (VaEfeso 4:22-24; VaGaratiya 5:22, 23) Paunoshanda maererano nomudzimu waMwari, unobatanidzwawo zvechokwadi muparadhiso yomudzimu.
11 Jehovha akaunganidza muparadhiso yomudzimu iyi rudzi rwevanhu vaanoda—vanomuda, vanoda rugare, uye vano“ziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mateu 5:3) Ivavo ndivo vanhu vachava neropafadzo yokupupurira kudzorerwa kunotoshamisa zvikuru—kwevanhu nokwepasi rose.
“Tarira! Ndiri Kuita Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva”
12, 13. (a) Nei uprofita hwokudzorera huchave nokumwezve kuzadzika? (b) Chinangwa chaJehovha nokuda kwepasi ndechei sezvakataurwa muEdheni, uye nei izvi zvichitipa tariro yenguva yemberi?
12 Uprofita hwokudzorera huzhinji hahungorevi kudzorerwa kwokunamata bedzi. Somuenzaniso, Isaya akanyora nezvenguva apo vanorwara, zvirema, mapofu, nematsi vachaporeswa uye kunyange rufu pacharwo ruchamedzwa nokusingaperi. (Isaya 25:8; 35:1-7) Zvipikirwa zvakadaro hazvina kuzadzika sezvazviri chaizvo munyika yeIsraeri yekare. Uye kunyange zvazvo takaona kuzadzika kwomudzimu kwezvipikirwa izvi muzuva redu, pane zvikonzero zvakasimba zvokudavira kuti munguva yemberi, pachava nokuzadzika chaiko, kuzadzika kwakazara. Izvozvo tinozviziva sei?
13 Kare muEdheni, Jehovha akaratidza pachena chinangwa chake nokuda kwepasi: Raifanira kuzogarwa nemhuri yevanhu inofara, ine utano hwakanaka, yakabatana. Murume nomukadzi vaifanira kuzotarisira pasi nezvisikwa zvaro zvose, kushandura nyika yose kuti ive paradhiso. (Genesi 1:28) Iye zvino zvakaita nyika zviri kure naizvozvo. Zvisinei, iva nechokwadi chokuti zvipikirwa zvaJehovha hazvimbokoneswi. (Isaya 55:10, 11) Jesu, saMambo Mesiya akagadzwa naJehovha, achaunza Paradhiso yenyika yose iyi.—Ruka 23:43.
14, 15. (a) Jehovha achaita kuti “zvinhu zvose zvive zvitsva” sei? (b) Upenyu huchava hwakaita sei muParadhiso, uye chii chinonyanya kukufadza iwe pachako?
14 Fungidzira uchiona pasi rose rashandurwa kuva Paradhiso! Jehovha anoti nezvenguva iyoyo: “Tarira! Ndiri kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva.” (Zvakazarurwa 21:5) Fungidzira kuti izvi zvicharevei. Kana Jehovha apedza kushandisa simba rake rokuparadza panyika ino yakaipa, pachasara “matenga matsva nepasi idzva.” Izvi zvinoreva kuti hurumende itsva ichatonga iri kudenga nzanga itsva yepasi pano yevanhu vanoda Jehovha uye vanoita kuda kwake. (2 Petro 3:13) Satani pamwe nemadhimoni ake, vachamanikidzwa kusaita basa. (Zvakazarurwa 20:3) Kokutanga muzviuru zvemakore, vanhu vachasunungurwa pakukanganiswa ikoko nokuvengwa. Hapana mubvunzo kuti pfungwa yokusunungurwa ichava inofadza kwazvo.
15 Pakupedzisira tichakwanisa kutarisira nyika ino yakanaka zvikuru sezvatakanga tagadzirirwa kuita pakutanga. Pasi rakasikwa rine simba rokuzvigadziridza. Makungwa nenzizi zvakasvibiswa zvinogona kuzvichenesa kana kunobva zvinosvibisa zvacho kukabviswa; nyika yakasakadzwa nehondo inogona kunaka kana hondo dzikamira. Zvichafadza chaizvo kushanda zvinowirirana nepasi, kubatsira kurishandura kuva paka yakaita sebindu, Edheni repasi rose rinenge rine zvinhu zvakasiyana-siyana zvisingaperi! Pane kungoparadza mhuka nemiti nemhaka yokukara, vanhu vachange vava norugare nezvisikwa zvose panyika. Kunyange vana havazombotyi zvikara zvomusango.—Isaya 9:6, 7; 11:1-9.
16. MuParadhiso, kudzorerwa kwei kuchabatsira munhu wose akatendeka?
16 Tichaonawo kudzorerwa kuchiitika pamiviri yedu isu pachedu. Pashure peAmagedhoni, vachapona vachaona kuporesa kuchaitwa nenzira inoshamisa munyika yose. Sezvaakaita paakanga ari pasi pano, Jesu achashandisa simba raakapiwa naMwari kuita kuti mapofu aonezve, matsi dzinzwe, kuporesa vanokamhina nendonda. (Mateu 15:30) Vakwegura vachafadzwa nokuva nesimba idzva rouduku, utano, uye simba. (Jobho 33:25) Mafinya achapera, makumbo nemaoko zvichatasamuka, uye tsandanyama dzichava nesimba idzva. Vanhu vose vakatendeka vachaona zvaikonzerwa nechivi nokusakwana zvichipera zvishoma nezvishoma, zvichienda. Tichaonga Jehovha nomwoyo wose nokuda kwesimba rake rinoshamisa rokudzorera! Ngatimbotarisa zvino pane chinhu chimwe chinofadza chenguva yokudzorera inonakidza iyi.
Kudzorera Upenyu Kuvakafa
17, 18. (a) Nei Jesu akatsiura vaSadhusi? (b) Chii chakaitisa kuti Eriya azokumbira Jehovha kuti amutse munhu?
17 Muzana remakore rokutanga C.E., vamwe vatungamiriri vechitendero, vainzi vaSadhusi, vakanga vasingatendi kuti kune rumuko. Jesu akavatsiura nemashoko okuti: “Marasika, nokuti hamuzivi Magwaro kana simba raMwari.” (Mateu 22:29) Hungu, Magwaro anoratidza kuti Jehovha ane simba rakadaro rokudzorera. Akadaro sei?
18 Fungidzira zvakaitika muzuva raEriya. Imwe chirikadzi yakanga yakabata chitunha chomwana wayo mumwe bedzi mumaoko. Mukomana wacho akanga afa. Muprofita Eriya, uyo akanga ari muenzi wechirikadzi yacho kwechinguva, anofanira kuva akarohwa nehana. Pakutanga akabatsira kununura mwana uyu kuti asafa nenzara. Eriya angangodaro akanga ava kuwirirana zvikuru nechikomana ichi. Amai vacho zvakangovapedza simba. Mukomana uyu ndiye aingova chiyeuchidzo bedzi chipenyu chomurume wavo akanga afa. Vangadaro vaitarisira kuti mwanakomana wavo aizovatarisira vachembera. Yaora mwoyo, chirikadzi yacho yakatyira kuti yakanga iri kurangwa nokuda kwechimwe chivi chayakanga yaita kare. Eriya aisagona kutsungirira kuona dambudziko iri richiwedzera kuomeswa zvakadai. Akatora chitunha chiya zvinyoronyoro pachipfuva chaamai vacho, akachitakura kukwira mudenga mukamuri rake, ndokukumbira Jehovha Mwari kuti adzorere mweya wemwana wacho, kana kuti upenyu.—1 Madzimambo 17:8-21.
19, 20. (a) Abrahamu akaratidza sei kuti aiva nokutenda musimba raJehovha rokudzorera, uye kutenda kwakadai kwakanga kuchibva pai? (b) Jehovha akakomborera sei kutenda kwaEriya?
19 Eriya akanga asiri munhu wokutanga aidavira kuti kune rumuko. Pachine mazana emakore, Abrahamu aidavira kuti Jehovha ane simba rokudzorera rakadaro—uye nokuda kwechikonzero chakanaka. Apo Abrahamu akanga ava nemakore 100 uye Sara ava ne90, Jehovha akadzorera simba ravo rokubereka rakanga rapera, nenzira inoshamisa achigonesa Sara kubereka mwanakomana. (Genesi 17:17; 21:2, 3) Gare gare, apo mukomana wacho akanga akura zvakakwana, Jehovha akakumbira Abrahamu kupira mwanakomana wake sechibayiro. Abrahamu akaratidza kutenda, achiziva kuti Jehovha aigona kudzosa Isaka wake aidiwa kuupenyu. (VaHebheru 11:17-19) Kutenda kwakasimba kudaro kungatibatsira kunzwisisa chikonzero nei Abrahamu asati akwira gomo kunopira mwanakomana wake, akasimbisa kuvashumiri vake kuti iye naIsaka vaizodzoka vose.—Genesi 22:5.
“Tarira, mwana wako mupenyu”!
20 Jehovha akazorega Isaka, naizvozvo pakanga pasina kudikanwa kworumuko panguva iyoyo. Zvisinei, pane zvakaitika kuna Eriya, mwanakomana wechirikadzi akanga atofa—asi kwete kwenguva refu. Jehovha akakomborera kutenda kwomuprofita nokumutsa mwana wacho! Eriya akabva apa mwanakomana wacho kuna amai vake, achitaura mashoko aya asingakanganwiki: “Tarira, mwana wako mupenyu”!—1 Madzimambo 17:22-24.
21, 22. (a) Ndechipi chaiva chinangwa chorumuko rwakanyorwa muMagwaro? (b) MuParadhiso, rumuko ruchava rwakakura sei, uye ndiani acharuita?
21 Nokudaro kokutanga muBhaibheri, tinoona Jehovha achishandisa simba rake kudzorera upenyu hwomunhu. Gare gare, Jehovha akapawo simba kuna Erisha, Jesu, Pauro, uye Petro kuti vadzorere vakafa kuupenyu. Chokwadi, vakamutswa ivavo pakupedzisira vakazofa zvakare. Kunyange zvakadaro, nhoroondo dzomuBhaibheri dzakadaro dzinoita kuti tifanoona zvinhu zvinoshamisa zvichauya.
22 MuParadhiso, Jesu achazadzisa basa rake saiye “kumuka noupenyu.” (Johani 11:25) Achamutsa mamiriyoni asingaverengeki, achivapa mukana wokurarama nokusingaperi muParadhiso pasi pano. (Johani 5:28, 29) Fungidzira kuonanazve seshamwari dzinodiwa nehama, dzakaparadzaniswa kwenguva refu norufu, dzichimbundirana, dzisingagoni nokufara! Vanhu vose vacharumbidza Jehovha nokuda kwesimba rake rokudzorera.
23. Ndokupi kwakanga kuri kuratidzwa kwesimba kukurusa naJehovha, uye izvi zvinosimbisa sei tariro yedu nokuda kwenguva yemberi?
23 Jehovha akapikira zvakasimba kuti tariro dzakadaro ndedzechokwadi. Akaratidza simba rake zvaasina kumboita kare paakamutsa Mwanakomana wake, Jesu, sechisikwa chomudzimu chine simba, achimuita wechipiri kubva kuna Jehovha bedzi. Jesu paakanga amutswa akaonekwa nemazana ezvapupu. (1 VaKorinde 15:5, 6) Kunyange kune vasina chokwadi, uchapupu ihwohwo hunofanira kuva hwakakwana. Jehovha ane simba rokudzorera upenyu.
24. Nei tichigona kuva nechivimbo chokuti Jehovha achamutsa vakafa, uye itariro yei iyo mumwe nomumwe wedu angakoshesa?
24 Jehovha haangorina simba rokudzorera vakafa kuupenyu chete asi anodawo kuita kudaro. Murume akatendeka Jobho akafuridzirwa kutaura kuti Jehovha anoshuva kwazvo kumutsa vakafa. (Jobho 14:15) Haunzwi uchiswededzwa pedyo naMwari wedu here, uyo anoda kwazvo kushandisa simba rake rokudzorera nenzira ine rudo kudaro? Zvisinei, yeuka kuti rumuko runongova rutivi rumwe rwebasa guru raJehovha rokudzorera riri mberi. Sezvaunoramba uchiswedera pedyo naye, gara uchikoshesa tariro inokosha yokuti unogona kuvapo kuti uone Jehovha achi“ita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva.”—Zvakazarurwa 21:5.
^ ndima 3 “Nguva dzokudzorerwa kwezvinhu zvose” dzakatanga apo Umambo hwaMesiya hwakagadzwa, mudyi wenhaka wokwaMambo Dhavhidhi akatendeka ari pachigaro choUmambo. Jehovha akanga apikira Dhavhidhi kuti mudyi wenhaka wake aizotonga nokusingaperi. (Pisarema 89:35-37) Asi pashure pokunge Bhabhironi raparadza Jerusarema muna 607 B.C.E., hapana munhu wedzinza raDhavhidhi akagara pachigaro chaMwari choUmambo. Jesu, uyo akaberekwa pasi pano somudyi wenhaka waDhavhidhi, akava Mambo akanga anguri apikirwa apo akagadzwa pachigaro choUmambo mudenga.
^ ndima 6 Somuenzaniso, Mosesi, Isaya, Jeremia, Ezekieri, Hosea, Joere, Amosi, Obhadhia, Mika, uye Zefania vose vakataura nezvomusoro uyu.
2 Madzimambo 5:1-15 Nemhaka yokuti akaratidza kuzvininipisa, mumwe murume munguva inotaurwa muBhaibheri akabatsirwa sei nesimba raJehovha rokudzorera?
Jobho 14:12-15 Jobho aiva nechivimbo chei, uye ndima idzi dzingava sei nechokuita netariro yedu yenguva yemberi?
Pisarema 126:1-6 VaKristu nhasi vanganzwa sei pamusoro pokudzorerwa kwokunamata kwakachena uye mugove wavo makuri?
VaRoma 4:16-25 Nei zvichikosha kuratidza kutenda musimba raJehovha rokudzorera?